Looks Nepal | » आईशाेलेसन बाट स्वर्गीय बुबालाई सम्झदै रामेश्वर Looks Nepal आईशाेलेसन बाट स्वर्गीय बुबालाई सम्झदै रामेश्वर – Looks Nepal
Aug, 23, 2020	looksnepal
रामेश्वर घिनाङजु श्रेष्ठ
मेरो आदरणीय पिता रामचन्द्र घिनान्जु ९८ औ बर्ष प्रवेश गरि हामी बाट सदा-सदाका लागि कुनै दुख नै नदिई जानू भयो ।
तर पनि बुबा प्रती हाम्रो माया समाजसेवाकाे बाटो सिकाएर जानू भयो तपाईले सिकाउनु भएको बाटो हरु बिर्सने छैन । यो हाम्रो अहम पनि हो । दिनु बाहेक कहिलै लिन सिकाउनु भएन । यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो बा ।
तर पनि के आई लाग्यो लाग्यो? हाम्रो परिवारमा शुभचिन्तक हरु सामु राख्नै पर्ने बाध्यता पनि आयो । आफुले आफू लाई सम्हाल्ने कोशिस गरे । तर पनि मन बिच्ल्ली भयो निद र भोक दुबै हरायो । सहने बाटो रोज्छु । रोज्नुनै सकिन ? के यो धुलिखेल बासिलाई दिन के चै बांकी छ र बा केही तपाईं को दिने कसैलाई वचन दिनु भएको भए सपनामा आएर भन्नू है बा म पुरा गर्ने छु बा ।
हामि तपाई को एउटा तस्बिर मा समेत हेरेर तपाई को चिरआत्मा को कामना गर्न शान्तीको दिप बत्ती समेत बाल्न मौकानै दिएनन बा । हामिलाई कामना गर्न समेत दिएनन बा । यो मेरो सेतो धोती कपड़ा मात्र नभएको भैदिए हाम फालेर निस्कने पनि सोचे । म सित सेतो लुगा धोती बाहेक केही थिएन बा । अर्को लुगा मात्रै भएको भए म हाल फालेर निस्कने थिए बा । यि पापीहरुसङ्ग लडाइँ लद्न । बा तपाईंलाई मैले दाग बत्ती दिने कत्रो कति बर्ष को धोको थियो । दाई पनि बुढा भयो र सक्नु हुन्न भनेर मिले दाग बत्ति लगाई दिने कत्रो इच्छा थियो बा । धेरै इच्छा हरु सजाएका थिए बा । तपाई लाई १०० औ बर्ष नगाउने कत्रो कस्तो गर्ने मन थियो बा।
बा हामिलाई थप हौसला दिनु को सट्टा अझै थप दुखित बनायो बा । बुबा तपाई को काजकिरिया समेत बाट बन्चित गरायो बा पापी समाज छ र छिमेकी हरु बाट बा भोलि आफुसधैं जिबितै हुने जस्तो गरि मर्नै नपर्ने जस्तो व्यबहार गरिदेखाए। सायद फेसबुक मिडिया हरुमा थुप्रै आदर, सम्मान, प्रसंशा शर्दाञ्जलि दिनेको आेहिरो र उहाँले गरेका काम हरुको थुप्रै शुभचिन्तक बिकासप्रेमी हरु बाट गुमाउनु परेको पिडा व्यक्त गर्नुको साथैअनेक शीर्षकहरु बिकासप्रेमी नक्षत्र, समाज मा समर्पित, धुलिखेल नगर, शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, बिश्वबिध्यालय, हजारसिंढी जस्ता थुप्रै काम को प्रशंसा, थुप्रै संघ संस्थाहरुमा सम्लग्नता धुलिखेल को बिकास निर्माणकार्य र नेपाली कांग्रेस बाट समेत चिर परिचीत हुनु हुन्थ्यो ।
त्यसैले पनि होलान नाम धेरै कमायो भने पनि गार्‍हो हुन्छ पनि भन्ने सुन्ने गरेको छु । त्यै भएर होला हामिलाई धम्की र पावर प्रयोग गरि धुलिखेल हस्पिटल को एउटा कोठा भित्र थुनेर कैदी को रूपमा थन्काए । अनि बजार भित्र नानाथरी बहानाबाजि बनाए उजुरी छिमेकीको भनेर बनाउनेतर्फ तरिका अपनाउन सफलता हासिल गरे । भोलि को केही बिचारै गरेनन सफलता प्राप्त गर्ने हरुले यस दु:खद घडी मा पुलिस आर्मी को धम्की को भाषा प्रयोग गरि ल्याईयो ।
सुबिधाको नाम दिएर कोचियो । यो हाम्रो लागि एउटा हस्पिट्ययालिटि जेल जस्तै लाग्यो । हामी प्रतीदया माया गर्ने कोहि छैन भन्ने महसुस भयो । रात छर्लङ्ग बितिसक्दा पनि निन्द्रा लाग्दैन । आँखा छर्लङ्ग पारीबस्नु परेको छ । बिहानी पख निदाउन खोज्छु निकै आवाज आउने गर्दो रैछ । के भनी सोचीरहे डरपनि लाग्यो तर उत्तर पछिम बाट चल्ला कुखुरा कराउने पो रहेछ मसानघाट पनि नजिकै छ भनेको सुनेको थिए डरले बिहान भै सक्छ।
कतिदिन यसरी राख्ने हो केही थाहा छैन । बुबा को आत्माले पनि जो कोहिलाई पनी माफदिनेछैन मेरो बुबाको आत्मा ले । हामी बाट पनि माफी दिनेछैन ।
समय बलवान् छ हामिलाई यस्तो बुबा पाएकोमा हामी हाम्रो परिवार कति गौरब गर्छु । हामी लाई कति घमण्डका साथ आफ्नो नाम नै नभनी रामचन्द्र घिनान्जुको नाम लिन्छु अनि ओहो भनेर कति इज्जत सम्मान गर्नु हुन्छ । बाबु बुढा भयो बाबुको नाम राख्नु पर्छ भनेर सम्झाउनु हुन्छ तेहि बाटो अङ्गाले ।
धुलिखेल खानेपानी बाट अध्यक्ष पदमा उम्मेद्बारी दिए जित्लान र भनेर धुलिखेलबासी ले खिसी गर्थे त्यो सोभाबिक नै थियो काठमाडौं बसेर धुलिखेल चुनाब जित्ने भनेर जिस्काउने पनि गरे। आफुले जिन्दगीमा हार कहिल्यै पनि स्विकार्नु परेको थिएन। मैले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे कसै को दिमागमै थिएन। मैले आफूले सफलता प्राप्त गर्न बुबालाई नै दाउमा राखे । त्यो के थियो भने चुनाब प्रचारप्रसार मा बुबाबाट परिचय दिने अन्तिम बान थियो मेरो फोटाेको पछाडी बुबाको फोटाे छपाएर सबै साथीभाई लागे । चिन्दैनाै यो मान्छे भन्थे । होपनी बुबाको फोटाे देखाएपछि यो चिन्नुहुन्छ भन्दा किन नचिन्नु रामचन्द्र साहु भन्थे । उसैको कान्छा छोरा हो भनेपछि खुशी हुन्थे र बिजयी पनि गराए ।
म मेरो बा बाटै चिरपरिचित छु गर्ब छ मलाई बुबा को कान्छाछोरा हुनु मा धुलिखेल लाई सेवा गर्ने मेरो ठुलो सपना छ । धुलिखेल समाज काठमाडौं कमिटीबाट निकै मनपराउनु हुन्छ भन्ने गरेको छु म काठमाडौं भन्दा पनि धुलिखेलको सेवा मा लाग्नु रुचाउने गर्छु सबै लाई थाहा पनि छ ।
बुबालाई मैले बुबा छंदै उपहार दिने निर्णय गरे बुबाले स्विकार्नु भयो ८८ औं जन्मदिन को बर्थडे गिफ्ट थियो रामचन्द्र घिनान्जु समाजसेवा प्रतिस्ठान कोष । सो अवसरमा प्रत्येक वर्ष मनाउंदै आए सामाजिक काम गर्दै आए । अहिले यो बर्ष जन्मदिन मनाउन पाएनौ त्यो दिनकै दिन बुबा मृत्यु संग लडाइँ लड्दै हुनुहुन्थ्यो । कोष ३५ लाख छ । १००औ सेचुरी मा ५० लाख पुर्याउने योजना छ । बुबा तपाईको आत्मा लाई ठेस पुग्ने केही काम गर्ने छैन बा ।
म बाट केही गल्तीहरु पनि भयो होला । तपाईंलाई हामिले भन्दा पनि निक्कै मायागर्ने पनाती लियम तपाईको पर्खाई मा थियो । हजुरबा… हजुरबा… हजुरबा… खोइ कराई बस्छ्न । अब हामी गएर के भनौ बा ? मेरो मुख मा शब्दनै छैन बा । म कसरी चित्तबुझाएर बस्नु बा म तपाई को कान्छा मलाई गाह्रो भयो बा बन्द गरे सकिन बा सकिन अति भो बा…
(धुलिखेल खानेपानिका अध्यक्ष रहनु भएका समाजसेवि रामेश्वर घिनाङ्जु श्रेष्ठ हाल काेराेना संक्रमित भई धुलिखेल अस्पतालमा आईशाेलेसनमा हुनुहुन्छ )
गृहमन्त्रीलाई हराउँदै डा. देबकोटा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित
दुई सातामा तीन सय पक्राउ